Wednesday, April 28, 2010 Sabtida, Juun 27, 2015 Scott Hardigree
Sidaan wada ognahay, iimaylka suuq geynta ayaa shaqeynaya sidaa darteed kuma caajisi doono macluumaadkan. Taabadalkeed, aan aragno waxa lataliyaha suuqgeynta emailku yahay iyo waxa ay kuu qaban karaan.
La-taliyeyaasha suuqgeynta emailka guud ahaan waxay qaataan saddex foom, an Wakaaladda Suuq geynta Emailka, Freelancer, ama shaqaale guri-joog ah Adeeg Bixiye Email (ESP) ama Wakaaladda Dhaqanka; kuwaas oo dhammaantood leh xirfado iyo khibrad u gaar ah sameynta istiraatiijiyado suuqgeyn email oo wax ku ool ah. Si kastaba ha noqotee, kartidooda asaasiga ah iyo bixinta adeegyadu way kala duwan yihiin, si weyn.
Marka ma u baahan tahay la-taliye suuq-i-meel ah? Hadday sidaas tahay, waa noocee? Isweydii su'aalaha soo socda.
Xalkeyga boostada ma sax baa aniga?
Miyuu ESP ama xalka guriguba bixiyaa dhammaan sifooyinka aan u baahanahay? Miyaan isticmaalayaa astaamaha aan bixinayo? ME way fududahay inaan isticmaalo? Qiyaastayda ma ku jirtaa qadka kharashkeyga?
Maxaan soo dirayaa?
Miyaan qorsheeyay maxaan diraa? Sida emaylka Soo-dhaweynta, Wargeysyada, Amarada la iska dhaafay, Dallacsiinta, iyo emayllada Dib-u-hawlgelinta? Maxaa iga maqnaa Meeday burburka silsiladda isgaarsiinta e-mayl?
Goorma ayaan soo dirayaa?
Miyaan u adeegsadaa macluumaad ku saleysan ficilkeyga qaataha si aan u diro emayllo, sida soo degsashada warqadda cad ama ka tagida gaariga? Ka warran emayllada taariikhda la riixo, sida kuwa iibsada fasaxyada ama sanad-guurada. Muxuu yahay jadwalka tifaftirka ee joornaaladayadu? Miyaan la soconayaa emaylka xayeysiinta ee ku-meel-gaadhka ah?
Maxay yihiin sharciyadayda ganacsigu?
Ma go'aansaday maxaa sababa in fariin la diro? Waa maxay xogta loo baahan yahay in lagu taageero farriinta? Miyay tahay in nidaamka soo dejinta xogta uu noqdo mid gacanta lagu sameeyo ama mid otomaatig ah? Waa maxay waxyaabaha la soo diro marka shuruudahaas la buuxiyo? Muxuu yahay qorshahayga Magacyada iyo Khadadka Mawduuca? Miyaan isku qasaa? Waa maxay iyo goorma ayaan tijaabinayaa?
Waa maxay ujeedooyinkeygu?
Miyaan dejiyey yoolal, sida tirada soo dejinta, iibka, diiwaangelinta? Maxaan qorsheynayaa inaan sameeyo si aan u koro liiska? Maxaan sameyn karaa si aan u yareeyo isku dhejinta?
Waa maxay baahiyaha warbixintaydu?
Miyaan u baahanahay inaan arko wax ka badan kaliya qasabno oo la furo si loo hagaajiyo natiijooyinkeyga oo aan u caddeeyo kiiskeyga? Miyaan ubaahanahay qasabadayda xogta banaanka sida CRM iyo degel Analytics qalab si loo dhiso oo loola socdo mitirkeyga guusha?
Suuqgeynta iimaylku waa dadaal qiimo badan u leh suuqleyda badankood, laakiin howshu waxay noqon kartaa mid dhib badan oo waqti badan qaadata. La taliyaha suuqgeynta emailka ama wakaaladda ayaa kaa caawin kara inaad la kulanto yoolalkaaga adiga oo kuu oggolaanaya inaad waqtigaaga uga faa'iideysato inaad ku shaqeyso dhinacyada kale ee ganacsigaaga.
Ma u baahan tahay wax ka badan kaliya aragti? Hay'ad emayl-diiradda saareysa ayaa sidoo kale bixin karta adeegyada taageerada, iyo sidoo kale jihada, ee looga baahan yahay inay bilaabaan oo ay taageeraan barnaamij suuqgeyn email oo xoog leh; aqri sida loo shaqaaleeyo wakaaladda suuq geynta emaylka si aad wax badan ka bartaan.
Tags: la taliyaha emailkaEmail MarketingLa Taliyaha Suuq geynta Emailka
Bartamaha Webmaster-ka Google wuxuu helaa casriyeyn culus